स्मार्ट फोन किन्दा के कुरामा ध्यान दिने? – जीवनशैली
तपाईं स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ ? स्मार्ट फोन किन्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् । नयाँ स्मार्ट फोन किन्दा विशेषगरी स्क्रिन तथा डिस्पे (रिजोलुसन), ब्याट्री, प्रोसेसर, र्‍याम, स्क्रिन क्वालिटीलगायतका विषयमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अलि चलेको कम्पनी रोज्नुपर्छ, ताकि फोनमा समस्या आएमा ग्राहक सेवा तुरुन्त पाइयोस् ।
एटिएमले पैसा दिएन भने के गर्ने ?
TAGS: मोबाइल खरिद